Schoolslọ akwụkwọ nchekwa | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Ụlọ akwụkwọ Nchedo
Safelọ akwụkwọ nchekwa
N'Astria, ebunyere ụmụaka ihe ụmụ nwoke banyere ụlọ akwụkwọ LGBT na mmemme n'ime ụlọ ọrụ ana-echekwa Nchekwa. Dika nne na nna jụrụ ihe mmemme a, aha na ụdị ya nke ewepụtara ya agbanweela ọtụtụ oge wee na-eme ya. Otutu otu di iche-iche eweputala atumatu ozo ndi nkuzi n’eji ihe ndia.
Agbanyeghi na atumatu ulo akwukwo di nchebe abughi ihe di egwu, atukwasiri echiche nke mmuta nwoke na nwanyi na mmeko. Anyị etinyela ngwa ndị a n'ọtụtụ mmemme ndị a na saịtị a maka ozi gị.
Ulo akwukwo nkuzi di nchebe.
Schoolslọ Akwụkwọ Nchedo Gender Ideology Ihe Nkuzi.
Mmekọrịta Kwesịrị Ekwesị & Nkwanye ùgwù. Ihe nkuzi banyere nwoke na nwanyi.
Nchebe ibanye nke Gender Teaching Materials site Family Plan Victoria.
Inwude ngwa ngwa na ịchụkwudo ngwa ngwa nkuzi.
Mmekọahụ na-ekwesịghị ekwesị doro anya iji na-ezi ụmụ akwụkwọ ihe.
Etu esi eme ka ndi enyi gi.
Ihe Nleta Nke Mgbochi Ọrịa HIV maka Ndị nwoke nwere mmasị nwoke.
Nnwere Onwe nke Ozi - Mmemme Schoolslọ Akwụkwọ Mmemme Na Victoria Australia.
CAUSE zigara FOI iji chọpụta ihe dị na mmemme “Schoolslọ Akwụkwọ Nchedo” a na-akụziri ụmụ akwụkwọ. Nke a bụ nzaghachi.
Ndị nkuzi na ụlọ akwụkwọ echekwara echekwa maka ndị nne na nna.
Ọnụọgụ abụọ PC Pack.
Ihe ngwugwu Transgender maka ndi nkuzi.
Ndị mmadụ na-ekwu maka Mmemme Maka Schoolslọ Akwụkwọ Dị Mma.